उमेर अनुसार दैनिक कति घण्टा सुत्ने ? – Everest Pati
काठमाडौँ । राम्रो स्वास्थ्य र सुन्दरताको लागि जसरी हामीलाई पोषक तत्व आवश्यक हुन्छ । त्यसरी नै निन्द्राको महत्व पनि स्वास्थ्य सँग जाडिएर आउछ ।
दैनिक जीवन यापनकै सहजताको लागि पनि निन्द्रा धेरै उपयोगी हुन्छ । यदी शरिरको लागि लामो उमेर चाहिन्छ भने हरेक मानिसको लागि दिनको कम्तिमा पनि सात घण्टा सुत्न आवश्यक हुन्छ । धेरै काम र ब्यस्त जीवनको कारणले मानिसहरु सुत्न पनि नभ्याउने भएका छन् । निन्द्राको उपयोगिता भने पहिले देखि नै आयुर्बेदका हिसावले हरेक मानिसको उमेर समुह अनुसार कति सुत्नु पर्दछ भनेर छुट्याइएको पाइन्छ ।
कम सुत्नुका कारण गुम्सावट, टेन्सन र चिडचिडापनजस्ता समस्या देखिन सक्छ । साथै कम निन्द्राको कारणले मानसिक तनाव जस्ता समस्याहर पनि देखिन सक्दछन् । तपाई जुनसुकै उमेरसमुहको मानिसको हरेक मान्छेलाई आफ्नो उमेरको हिसावले सुत्न आवश्यक हुन्छ ।
समय मिलाएर सुत्दा तपाईको छाला चाडै बुढो हुदैन र तपाई लामो समयसम्म स्वस्थ र खुसी जीवन जीउन सक्नुहुन्छ ।
कुन उमेरको मानिस कति घण्टा सुत्न आवश्यक छ : ३ महिना देखि ११ महिनासम्मको नवजात शिशुको लागि : १४ देखि १५ घण्टाको सुत्न आवश्यक हुन्छ । १२ देखि ३५ महिनाको बच्चा : १२ देखि १४ घण्टाको सुत्न आवश्यक छ । ६ देखि १० वर्षको स्कुल जाने बच्चा : १० घण्टा सुत्न आवश्यक छ । ११ देखि १८ वर्ष उमेर समुह : कम्तिमा ९ घण्टा निदाउन आवश्यक छ ।
जागिरे वा पेशेवर मानिस जस्को उमेर २० वर्षभन्दा माथि छ, उसको लागि कम्तिमा आठ घण्टाको निन्द्रा आवश्यक हुन्छ । बुढापाकाको लागि सुत्नको कुनै समयसिमा छैन निर्धारण गरिएको छैन् ।
यदी तपाई यसरी नै आफ्नो उमेरको हिसाबले सुत्ने समय तय गरेर नियमितता दिनुहुन्छ भने यसले तपाईलाई धेरै फाइदा मिल्नेछ । जसको अनुभव तपाई आफैले गर्नु हुनेछ ।
लकडाउनमा बालबालिकालाई रचनात्मक काममा कसरी सहभागी गराउने ?
रा’योको साग-सं’सारकै दोस्रो ब’ढी पोष’णयुक्त तर’कारी
यि तीन राशिले लगाउनु हुँदैन् सुनका गरगहना [हेर्नुहोस्]
कोरोनाविरुद्ध किन प्रभावकारी छ गुर्जाे ?